Accueil > Gazetin'ny nosy > Volam-bahoaka: Ireo fanodinkodinana nataon’ny mpanao pôlitika
Volam-bahoaka: Ireo fanodinkodinana nataon’ny mpanao pôlitika
Mitaky ny mangarahara sy ny marina amin’ny fanodinkodinana ny volam-bahoaka sy ny fananam-panjakana ny Malagasy maro amin’izao fotoana izao. Izany raharaha izany dia mahakasika ny mpanao pôlitika na mbola eo amin’ny fitondrana na efa tsy eo intsony. Nanomboka ny taona 2001 ka hatramin’izao dia môdely ratsy no nomen’ny mpanao pôlitika ny taranaka aty aoriana ka mahazo vahana amin’ny mponina izany fa indrindra ireo tanora izay teraka tamin’ny taona 1990-2000. Tsy mahalala afa-tsy vola izy ireo ka raha vao miresaka raharaham-pirenena aminy dia olona mpangalatra sy mpanan-karena tampoka ary mpanjakazaka no hitany, ka ny mpanao pôlitika dia ireo no famaritana azy. Teo aloha teo aza dia nalaza be mihitsy ilay hira vahiny nohagasiana hoe “manaova pôlitika raha te hanan-karena”.
Ankehitriny, ady hevitra eny anivon’ny fiaraha-monina ao ankatokin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena izao ny mahakasika ny halatra vitsivitsy. Isan’ny goavana indrindra teto amin’ny firenena ny niainana tamin’ny taona 2008 sy 2009 ka hatramin’izao 2018 izao.
Te-hahalala ny marina mahakasika izany ny vahoaka Malagasy alohan’ny fifidianana ka aoka izay voakasika izany hoy izy ireo hitondra fanazavana bebe kokoa, ary tokony hisy adi-hevitra nasionaly izany.
Ny varin’ny Magro tao Toamasina izay norobain’ny olona tamin’ny andro nanombohan’ny tetezamita tamin’ny taona 2009 no isan’ny ipetrahan’ny fanontaniana voalohany. Ity orin’asan’ingahy Ravalomanana Marc ity dia voalaza fa nanana vary 300 000 taonina mahery tao amin’ny seranan-tsambo tao Toamasina ary nisy mihitsy ny toerana manokana nametrahana izany izay an’ny Magro tamin’izany fotoana izany. Voalaza fa ny volam-panjakana sy ny volam-bahoaka no nampiasain’ingahy Ravalomanana Marc nividianana ireo vary ireo. Ny orinasa Magro no mpivarotra azy, ary efa natao ho fananan’ity filoha teo aloha ity izany miaraka tamin’ny ombivavy beronono nafarana tany Nouvelle-Zélande izay efa mahatratra an’arivony maro, ka tsy fantatra izay niafarany hatramin’izao.
Norobain’ny olona maro tao amin’ny fanjakana tetezamita iny vary iny sy ireo ombivavy ka tsy hita izay nanjavonany. Volam-bahoaka nefa no nividianana ireo. Tonga amin’ny fitenenana hoe “mpijoko voajoko” ingahy Ravalomanana tamin’iny raharaha iny. Io vary io dia very anjavony tao amin’iny fanjakana tetezamita iny. Misy aza no milaza fa io no nanaovan’ireo olona nitondra tamin’ny vanim-potoanan’ny tetezamita iny ny “vary mora”. Nankaiza ny vola vidin’ireny vary ireny satria malaza fa maro ny mpanao pôlitika no nanan-karena tampoka tamin’izany.
Tsy izany ihany fa mbola resaka hafa koa ny raharaha ny vola tao amin’ny banky foibe tao Manakara izay nahodinkodin’ingahy Louis Ranjeva, izay mitontaly 60 miliara ariary tamin’ny andro nitondran’ingahy Ravalomanana Marc iny. Nisy koa ny vola tany amin’ny banky tany Sambava, ny tao amin’ny banky foibe teto Antananarivo sy Mahajanga ary ny mahakasika ny vola nozaraina natao fafikatrana teny Iavolona nataon’ingahy Ravalomanana Marc sy ny mpomba azy hamonoana afo tamin’ny 2009 ireny.
Mandeha dia mandeha koa ny resaka ankehitriny mahakasika ny fametrahan’ny mpitondra sy ny mpanao pôlitika Malagasy vola amin’ny banky any Erôpa. Toa izany koa amin’ny banky amin’ny firenena hafa tao ny ao Maorisy sy Dobay ary Frantsa.
Tsy azo avela amin’izao koa ny vola vokatra ny fanodinkodinana ny harem-pirenena nanomboka ny taona 2001 izay nitondran’ingahy Ravalomanana Marc ka voaresaka amin’izany ny mpanao pôlitika Malagasy mitondra ankehitriny sy ny teo aloha ho atidoha amin’izany. Volamena sy vatosoa, harena voajanahary ary andramena no lazain’ny mpanaraka ny raharaham-pirenena sy ny olona amin’izany.
Ny farany indrindra dia ny fanodinkodinana ny volam-panjakana ataon’ny mpitondra ao amin’ny antoko HVM (Hery vaovao ho an’i Madagasikara) amin’izao fotoana izao, satria mbola tsy mazava ny raharaha Claudine Razaimamonjy. Iny niaraha-mahita iny koa ny nafitsoka ny ARMP (Autorité de régulation des marchés publics”.
Fa mbola raharaha be koa ny tsy fandoavan’ingahy Ravalomanana Marc ny vidin-jiro tamin’ny JIRAMA tao anatin’ny 8 taona mahery nanomboka ny taona 2001 ka hatramin’ny 2009.
Maro no takian’ny olona mahakasika ireo raharaha ireo ary tokony hitondra fanazavana amin’izany ny fanjakana.
Aoka ny olona tafiditra amin’ireo mba ho hanadihadiana toa ny any amin’ny firenena hafa izay mandala ny tany tan-dalàna ary miady amin’ny kolikoly ireny. Ny eto Madagasikara dia ny vahoaka madinika mazana no migadra fa ireo izay nanam-pahefana sy manam-bola dia lavitra ny fonja tanteraka.
Ilain’ny vahoaka ny hahalalana sy hampazava ireo alohan’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena amin’ity taona 2018 ity.